Ucingo lwami lukhala usuku lonke. Izikhathi eziningi ngiba emihlanganweni namakhasimende kepha kwesinye isikhathi kuhlala kuvulekile edeskini lami ngenkathi ngenza umsebenzi. Lapho ifoni ikhala, ngibheka ngaphesheya futhi kuvame ukuba nekhodi yendawo engama-317 eshaywayo. Kodwa-ke, inombolo ayikho koxhumana nabo ngakho angiboni ukuthi ngubani ngempela lowo ongishayelayo. Nginoxhumana nabo abangaphezu kuka-4,000 efonini yami - okuvumelaniswe ne- LinkedIn futhi Evercontact… Ngikhomba kahle wonke umuntu ongibizayo.
Nasi isibonelo kusuka I-RingDNA:
Nginokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-30 kwezentengiso, kufaka phakathi ukuhlola ngocingo futhi ngike ngazama izindlela eziningi ezahlukahlukene zokuqoqa izingcingo ezibuyisiwe noma ukuqoqwa njenganoma ngubani. Ngenkathi ngikuqonda ukuheha kwe- izinombolo zendawo ukuvela kumazisi womshayeli wethemba, ngithola ukuthi ukwenza njalo kuvame ukusikisela ithemba abalikhohlisiwe abalithathayo futhi bakhiqize umgoqo wokunganaki okudingeka kwephulwe ekuqaleni. Ngenkathi lezi zindlela zisebenza ekufinyeleleni kulokho okushesha ngokushesha futhi zidlulisa nokuthi asibonisi lutho futhi asicacile endleleni yethu futhi sibukela phansi indlela eya ebudlelwaneni bokuthembana.